Akụkọ - Ndụmọdụ maka iyi ihe mkpuchi ihu kwa ụbọchị
Ndụmọdụ maka iyi ihe mkpuchi ihu kwa ụbọchị
Soro usoro ndị a iji yikwasị, yipụ ma yikwasị ihe mkpuchi ihu 3M kwa ụbọchị. Ihe mkpuchi ihu kwa ụbọchị dabara adaba maka eyi kwa ụbọchị n'ebe ọha na eze, a na-asachapụ aka ma na-emegharị ya maka uru na-adịte aka.Ihe mkpuchi ihu anyị na-abụghị nke ọgwụ nwere akwa akwa akwa abụọ, loops ntị na-agbanwe agbanwe na obere imi emebere maka nkasi obi.
Ndụmọdụ ị ga-eburu n'uche
Na-akpachapụ anya nke ọma
Jiri mmiri ncha sachaa aka gị maka sekọnd 20 tupu iyiri na mgbe ị wepụsịrị ihe mkpuchi ihu 3M gị kwa ụbọchị ka ịzena ibufe unyi ma ọ bụ nje ọ bụla na nkpuchi.Jiri aka sanitizer nwere opekata mpe mmanya 60% ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịsa aka gị.
Gbaa mbọ hụ na nkpuchi dị mma
Were nkpuchi site na loops ntị wee nyochaa tupu itinye ya.Ọ bụrụ na ị hụ oghere ọ bụla, anya mmiri ma ọ bụ mmebi ọzọ, tụfuo ya ma jiri nke ọhụrụ dị mma.
Akọtụla ibe imi
Ihe mkpuchi ihu 3M kwa ụbọchị nwere obere imi nwere ike ịhazigharị.Kama ịtụnye obere imi imi, jiri aka abụọ gbadaa obere imi ka ọ dabere nke ọma megide imi na ihu gị.
mkpuchi zuru oke dị mkpa
Ihe mkpuchi gị kwesịrị ikpuchi imi na ọnụ gị mgbe niile, ọbụlagodi mgbe ị na-emegharị ọnụ ma ọ bụ isi gị.Ihe nkpuchi kwesịrị izu ike na ntụsara ahụ na ihu gị.
Ozugbo ọ gbanyere, na-aga n'ihu
Iwere nkpuchi ihu gị ma gbanyụọ na-emepụta ohere maka nje gbasaa - banye na ahụ gị.Mgbe ị nọ n'ihu ọha, ewepụla ihe mkpuchi gị n'elu àkwà mmiri nke imi gị ma ọ bụ hapụ ya ka ọ dapụ n'otu ntị.Nkpuchi na-arụ ọrụ naanị ka onye ọrụ, yabụ dowe ya ma ọ bụrụhaala na ị nọ ndị ọzọ.
Hichaa ihe mkpuchi gị ozugbo na nke ọma
Ekwesịrị ịsacha ihe mkpuchi ihu kwa ụbọchị mgbe ejirichara ya iji nyere aka belata mgbasa nke nje.Jiri mmiri ọkụ sachaa ihe mkpuchi ndị a nke ọma maka opekata mpe nkeji ise.Sachaa ma kpoo ikuku.Multipacks anyị dabara adaba pụtara na a ga-ahazi gị maka ọpụpụ ọtụtụ.
Gosi na ị na-elekọta gị site n'itinye ihe nkpuchi n'ọha ọha.
Tinyere ndọpụ uche ọha mmadụ, iyi ihe mkpuchi ihu bụ ụzọ dị mkpa iji gosi na ị na-eche maka ọdịmma obodo gị.Ihe mkpuchi ihu 3M kwa ụbọchị bụ nnukwu nhọrọ maka mmemme kwa ụbọchị dị ka ọrụ, ịzụ ahịa na imekọ ihe ọnụ. Ozi nchekwa dị mkpa:Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike dịka ụkwara ume ọkụ, ọnọdụ obi ma ọ bụ ọnọdụ iku ume, ị ga-akpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike gị (dọkịta) tupu eji ya.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Ihe mkpuchi mkpuchi China, Ihe mkpuchi ihu, Ihe mkpuchi PPE, Ihe mkpuchi China, Igwe iku ume FFP2, Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ,